Wax Ka Ogow Gabadhii Matashay Rani Lakshmibai (Boqoradii Jhaansi) (+Sawiro) - Hablaha Media Network
Wax Ka Ogow Gabadhii Matashay Rani Lakshmibai (Boqoradii Jhaansi) (+Sawiro)
HMN:- Atariishadan caanka ah magaceeda dhabta ah waa Kratika Senger Vedent oo inta badan loogu waco Kratika.
waxay dhalatay 3 Jul 1986 waa atariisho tvyada ka shaqeysa ayadoo kasoo muuqatay musalsalo badan.
xidigtaan waxay baratay amaba ku taqasustay Mass Communication, kadib Mumbai ayee timid ayadoo halkaas shaqo fiican karajeyneesay.
ugu dambeyn meel Agency ah ayee shaqo kaheshay, sido kalena waxay shaqo labaad kaheshay Hungama Tv mudo ayeena shaqoyinkas isku waday.
kadib sanadkii 2007 ayee si toos ah ugu soo biirtay fanka ayadoo kasoo muuqatay Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Tahi 2007.
intaa kadib waxay laqabsatay jiliinka musalsalada kadib markee musalsalkeedi koowad sameysay, waxay u xigay Kya Dil Mein Hai oo soobaxay 2008 balse Negative Role ama laadarnimo ayee kujisay musalsalkaas.
waxay noqotay xidig caalami ah maadama musalsaladeeda isdaba taxmeen sido kalena guulo gaaren ayadana amaan badan kumuteesatay.
waxay sanadkii 2010 la timid sheeko aan caadi aheyn oo ay kumataleysay boqoradii waa hore geeriyotay ee difaaceysay dalka India Jhaansi Ki Rani.
wuxuu noqday musalsal taarikhi ah maadama sheeko dhacday oo dhab ah laga soo minguuriyay, boqoradaas waxay nooleed kahor inta uusan Gandhi dhalan ayadoo xiligaas uu Ingiriiska gumeysanaayey India sidaa awged wuxuu ingriiska rabay inuu kudarsado amaba qabsado qasriga ay katalin jirtay boqoradaas.
sidaa awged waxay kudhaqaaqesa gabi ahaanba inee kasaarto wadankeeda ingiriiska maadama uu ugu dambeyn usoo dhigtay qasrigeeda.
hadaba Kratiga waxay udhabar adeegtay inee musalsalkaas hogaamiye weyn kanoqoto matashana booskii Jhaansi Ki Rani.